Daniel Derosi "meelna uguma socdo Roma"
Daniel Derosi “meelna uguma socdo Roma”
Updated About:301 days ago 0
Libaaxa qadka dhexe ee xulka Italy iyo naadiga Rome ayaa biyo qaboow kushubay warar beryahanbo laysla dhexmarayay oo sheegayay in xidiga uu ku wajahanyahay naadiga haysata horyaalka Ingiriiska ee Man city,Derossi ayaa sheegay in meelna uusan kaga socon caasimada Italy,isla markaasna uu waligiis dalban in lafasaxo.
Laacibkaan 29 jirka ah ayaa bil kahor qandaraaska ukordhiyay naadiga kadhisan caasimada ee Rome isagoo qalinka duldhigay heshiis gaaraya ilaa sanadda 2017-da,laakiin maalmihii udanbeeyay ayaa waxaa soo badanayay wararka sheegaya in xidigaan uu ku dhowyahay ku biirista Manchester City.
City ayaa Rome usoo bandhigtay in xidigan ay kasiiyaan qiimo dhan 35 million oo euro,sidookale waxay xidiga ubalan qaadeen in sanadkiiba ay siin doonaan 9million, taasoo shaki galisay mustaqbalka xidigaan.
Laakiin wiilka lagu naaneeso Amiirka yar ayaa ugu danbeyntii dhameeyay wararka iyo xanta suuqa taal,waxa uuna sheegay inuu sii joogi doono Rome waligiisna uusan meelna ka aadi doonin.
“Waxaa jiray warar beryahanbo leysla dhexmarayay, oo kusabsan aniga iyo Roberto Mancini,runtii wararkaas marka waan ku qoslay mararka qaarna xanaaq ayay igu dhaliyaan”.
Derossi ayaa Rome kusoo biiray sanadii 2002 waxa uuna usaftay 389 ciyaarood, kuwaasoo isugu jiray ciyaaraha horyaalka talyaaniga,iyo koobabka laga ciyaaro yurub,waxa uuna usaxiixay 47 gool intii uu kusugnaa garoonka Olompic stadium.